Siam Lotus – သူကြီးအိမ် အ၀စားဆိုင်။ နေပြည်တော်၊ သပြေကုန်းတောင်ကုန်း – Naypyidaw – Naypyidaw – Burma – Market Place – ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် | MoeMaKa Burmese News & Media
Siam Lotus - သူကြီးအိမ် အ၀စားဆိုင်။ နေပြည်တော်၊ သပြေကုန်းတောင်ကုန်းClick to enlarge image.Contact InformationContact Seller Location: Naypyidaw, Naypyidaw, Burma More Information
ထမင်းကြော် ခေါက်ဆွဲကြော် ကြာဇံကြော် ထမင်းပေါင်း (ကြက်/ဝက်)
စပါယ်ရှယ် ကြက်ချဉ်ငံကြွပ်တစ်ပွဲ ၃၅၀၀ကျပ်
စပါယ်ရှယ် ငါးခဲပတ်ကင် တစ်ပွဲ၈၀၀၀ကျပ်
စပါယ်ရှယ် ငါးခေါင်းဟင်းချိုတစ်ပွဲ ၄၅၀၀ကျပ်
ဟင်းချို အသားဟင်းလျာများနှင့်အသားသုပ်များကို တစ်ပွဲ ၃၅၀၀ကျပ်
သန့်ရှင်း လတ်ဆတ် အရသာပြည့်စုံသော ဟင်းလျာများ ဖော်ရွေပြူငှာသော
နေပြည်တော် သပြေကုန်း တောင်ကုန်းပေါ်က
Siam Lotus #အဝစား ဆိုင်မှ
#အဝစား Thai bbq & hot pot buffet
1person (Meat + Seafood) 12800 kyats
3in1 person gift
#Meat Set ကို ကြေးအိုး(အကင် ဟော့ပေါ့နှစ်မျိုးပါသောအိုး)ဖြင့် #အဝစား
#Seafood Set ကို
Charcoal grill ဖြင့်သုံးဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်.....
အချိုပွဲများ အရသာရှိသော ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြည့်စွက်စာများဖြင့်လူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကျ #အဝစားစနစ်ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံပေးမှာဖြစ်ပါသည်....
ဝက်ချို ဝက်စပ် ဝက်ပုန်းရည်
ငါးမွှေ ငါးစုပ် ငါးသလဲထိုး ငါးဆီပြန်
ညနေ ၅နာရီမှ ည၁၀နာရီအထိ
Tweet This Flag AdThis Ad has been viewed 1586 times. သင့်အကြောင်း သင့်လုပ်ငန်း ကြော်ငြာ သည်နေရာမှာ ကြော်ငြာနိုင်ပါပြီ ထပ်ဆင့်ဝေမျှပေးရန် ...EmailTweetPrintLike this:Like Loading...အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:	Comments are closed.
ကာတွန်း ATH ● မထသ ... အဲ .. YBS .. ကွ	ကာတွန်း မိုးသွင် ● ငါတို့သည် ....	သာလွန်ဇောင်းထက် ● အပြောင်းအလဲမှာ ပြည်သူဟာ အစမ်းသပ်ခံ၊ အနာခံ မဖြစ်ဖုို့ လုိုပါတယ်	မောင်မောင်စိုး ● ပြည်တွင်းစစ်နှင့် အပြုတ်တိုက်ရေး - အပိုင်း (၂)	ကာတွန်း သီဟ (စခန်းသစ်) ● မေးရမယ့် မေးခွန်းလား ...	ကာတွန်း ညီထွေး ● ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ ဝဲ ...	ကာတွန်း ညီပုချေ ● နှစ်ယောက်ပေါင်း လောင်းကျော်	မိုက်ခဲစိန် - လူပြိန်းကြိုက် အမေရိကန်သမ္မတကြီး ထရန့်ကို အမျိုးသမီးထုက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပွဲများနှင့် ကြိုဆို	မောင်မောင်စိုး ● ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆက်စပ်သတင်းများ (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ)	လင်းသက်ငြိမ် ● ရှောက်ဟုန်	မိုးမခ Kindel Store
မိုးမခ လမ်းညွှန်မှာ သင့်လုပ်ငန်း ပါသလားLedu Restaurant - လီဒူ စားသောက်ဆိုင် Burmese Monastery in Australia Simon Lim, DDS - ဒေါက်တာစိန်ဝင်း (သွားဆရာဝန်) Croton Travel & Tours Travel Agency · Cruise · Tours & Sightseeing Little Yangon - ရန်ကုန် အသေးစား Rangoon Superstar - ရန်ကုန်စူပါစတား Burmese Monastery in Central USA Burmese Monastery in UK Burmese Monastery in East Coast, USA Mandalar Charm Travels & Tours Co.,Ltd. မန္တလာချမ်း ခရီးသွားအေဂျင်စီ အခြား ဖတ်စရာများ>ေုကးမုံဦးသောင်း (အောင်ဗလ) ကဵန်းမာရေး စိုးရိမ်ရ
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Join 1,608 other subscribers
Twitter: moemakaခင်လေး ● ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးတွေကို မိဘတွေကိုယ်တိုင်က ချိုးဖောက်မိနေကြပြီလား https://t.co/khG8l2K7Nd https://t.co/mjkkCUrTJs about7hours ago ReplyRetweetFavoriteသျှင်မျိုးငယ် ● အငွေ့ပျံသွားသော ညများ https://t.co/14WYlyG9GZ https://t.co/2oyBrIBKSS about 8 hours ago ReplyRetweetFavoriteသာလွန်ဇောင်းထက် ● အပြောင်းအလဲမှာ ပြည်သူဟာ အစမ်းသပ်ခံ၊ အနာခံ မဖြစ်ဖုို့ လုိုပါတယ် https://t.co/IhSAizst25 https://t.co/wRC8gf7zAz about 12 hours ago ReplyRetweetFavoriteမိုက်ခဲစိန် – လူပြိန်းကြိုက် အမေရိကန်သမ္မတကြီး ထရန့်ကို အမျိုးသမီးထုက… https://t.co/JEXycYEjlg https://t.co/s7cZDGFagz about 13 hours ago ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း ညီထွေး ● ရွှေစွန်ညို ဘာကိုလိုလို့ ဝဲ … https://t.co/7fyf5rgsYL https://t.co/XBmZ1pgp5X about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite@moemaka ကြော်ငြာ … ကြော်ငြာ …	စာအုပ်မြင် ချစ်ခင်ကြပါစေ …	MoeMaKa Monthly December 2016 ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့.. မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ
ဒီလို ကြော်ငြာချင်သလားRyan Thaw, DDS - ဒေါက်တာမောင်မောင်သော် (သွားအထူးကု) Phann Dee Yar - ဖန်တီးရာ ဆုံရပ် (Create Space) Myanmar Journalism Institute - မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံ မိုးမခကို အိမ်အရောက် ပို့ပေးမည်
မိုးမခမာတိကာစဉ်	About MoeMaKa (69)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (117)
ကာတွန်း – အောင်မော် (102)
ကာတွန်း ATH (147)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (33)
ဌေးအောင် (မိုးမခ) (26)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (255)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (857)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (326)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (173)
Cartoon Box (2,746)
ကြော်ငြာရန် …What to eat in Mandalay - မန်း စားစရာ လမ်းညွှန် Simon Lim, DDS - ဒေါက်တာစိန်ဝင်း (သွားဆရာဝန်) Siam Lotus - သူကြီးအိမ် အ၀စားဆိုင်။ နေပြည်တော်၊ သပြေကုန်းတောင်ကုန်း ပညာရေး အထောက်အကူပြု - ဂန္ထ၀င်သစ်စာပေ မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်သမျှ မိုးမခမဂ္ဂဇင်းကို မြန်မာပြည်အနှံ့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်
By admin စက်တင်ဘာ လမကုန်ခင်မှာ မိုးမခမဂ္ဂဇင်း (စက်တင်ဘာ) မှာယူနိုင်ပါပြီ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၅၊...Read more » သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	Recent Commentsko zaw on မောင်ရစ် – ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အရေး တွေးမိတာMyynt Aung on အောင်သူငြိမ်း – မောင်မောင်စိုးရဲ့ လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာNalalu on ဆောင်းယွန်းလ ● မင်းဘယ်ပြေးမလဲ… ငါကကောCatwoman on လှကျော်ဇော ● မေမေရဲ့အစားထိုး ‘သား’shwethanmyint on ကာတွန်း ညီပုချေ ● နှစ်သစ်ဆီသို့ ….ကဏ္ဍများအလိုက်Maung Swan Yi